Ọtụtụ mgbe jụrụ ajụjụ
Na nke a n'ezie niile maka free?
Gịnị mere m ga aha?
Olee otú m pụrụ ịmụta na-enweghị mgbasa ozi?
Olee otú m pụrụ isi nyere gị oru ngo?
Olee otú oge ọ na-ewe ịmụta aka-ụdị?
Olee otú ị tụọ egosi okwu kwa nkeji (wpm)?
Gịnị ka m na mkpa iji TypingStudy.com?
Mgbe m na-amalite ihe, usoro ihe omume na-egosi na m ga-pịa ịgbanwee + akwụkwọ ozi. Gịnị kpatara nke ahụ?
Ònye ka ọ bụ maka?
Ọ dị mma maka dyslexic ndị mmadụ?
1) Ọ bụrụ na ị denyere aha, ị ga-enwe ọganihu ọmụma ọnụ na ihe mere eme.
2) Ị pụrụ ịmụta ihe na-enweghị mgbasa ozi (mgbe a onyinye nta)
Mgbe obere onyinye anyị ga-ewepu mgbasa ozi site na akaụntụ gị. Nwee ndidi, n'ihi na nke a bụ akwụkwọ ntuziaka usoro.
1) Dee ikwu banyere ihe na-amasị gị na-adịghị amasị
2) Dee banyere gị echiche, otú iji melite mmụta
3) Gwa ndị enyi gị banyere anyị (ekekọrịta anyị website na-elekọta mmadụ na netwọk, sonyere anyị https://www.facebook.com/TouchTypingStudy)
The ego nke oge dị mkpa ịmụta aka-pịnye ọma dabeere onwe gị àgwà. Ọ dịkwa mkpa na-eme mgbe nile. N'ihi na-arụpụta ezigbo ihe anyị na-atụ aro ka ị were 1 ihe a taa.
Cheta, ebe ọ maara ebe niile akwụkwọ ozi ndị ahụ apụtaghị na ị dị njikere maka dee ngwa ngwa. Mkpịsị aka gị mkpa ịzụlite ije ihe nakawa etu esi ma ọ bụ otú a na-akpọ 'muscle ije ebe nchekwa' nke ebe ọ bụla kpọmkwem isi na-emi odude, na-enweghị na-eche banyere igodo ma ọ bụ na-achọ na keyboard. Akpaaka mmegharị na-na na mepụtara site ukwuu ugboro ugboro. Cheta - na omume na-eme ka zuru okè!
Iji tụọ WPM, usoro ihe omume dị mkpa otú ọtụtụ okwu ị dere kwa nkeji. 1 okwu = 5 odide, gụnyere ohere na akara edemede.
Site teknuzu n'akụkụ gị mkpa naanị njikọ Ịntanetị. Otú ọ dị, ị nwekwara ike mkpa mkpali na njikere mma gị na aka dee nkà.
Biko, na-ahụ na kọmputa enyocha ndị njem mkpọchi bụ na mgbe ị na-amalite dee. Ọ bụrụ na ndị Onye ndu mkpọchi bụ na, usoro ihe omume jụrụ pịa jụrụ isi + Mgbanwe n'out oge.
Dee Ọmụmụ ihe bụ onye ọ bụla chọrọ ịzụlite ya ma ọ bụ ya aka dee nkà. Touch dee bụ nkà na-eme ka mmadụ pịnye, na-enweghị na-achọ na keyboard ịchọta ezi igodo.
Ee, dee Ọmụmụ adabara na-ndị mmadụ na dyslexia. Na aka dee nkà ndị a nwere a dị iche iche uru a ọnụ ọgụgụ nke ebe dị ka enweghị aka dee nkà. Dị ka ụfọdụ dyslexic ndị mmadụ nwere nsogbu na-aka dere, ma site na a ọsọ na readability ele ihe anya, mesịa ọrụ ga-abụ ihe adaba.